Odeessa Olmaa Oromiyaa Gara Garaa | QEERROO
Odeessa Olmaa Oromiyaa Gara Garaa
Posted on January 27, 2018 by Qeerroo
[SQ, amajji 27,2018] Godina Iluu Abbaabooraa aanaa Daarimuu irraa gaaffii “Karaan nuuf haa hojjetamu, bishaan nuuf haa galu” jedhanii gaaffii dhiyyeessan qofaaf qabamanii hidhaman.
Mootummaan abbaa irree wayyaanee dargaggoota Oromoo iraarsuuf duuba kan hin jenne, namoota gaaffii mirgaa gaafataniifi aantummaa uummataa qaban hidhuu itti fufteetti. Haaluma kanaan yeroo darbe dargaggoota gaaffii misoomaa gaafatan mana hidhaatti naqxeetti. Dargaggoonni kunniin maqaan kan nu dhaqqabe
1. Caalii luuccee
2. Sulee umar
3. Yaasin Jamaal
4. Salamoon Mabiraatee
5. Maammudee Muzammil
6. Huseen Fiqaaduufi
7. Abbush Darajjee akka ta’an maddeen keenya Daarimuu irraa SQBOf himaniiru.
[SQ, amajji 27,2018] Haaromsa Gadaa Hullee irratti balaa konkolaataa uumameen miidhaan hawaasarra dhaqqabuun dhaga’ame.
Akkuma beekamu torban kana keessa haaromsii Gadaa Maccaa kan Odaa Hullee lixa Oromiyaa Jimmaa keessatti geggeeffameera. Uummata bakka haaromsa Gadaa irraa galaa jiru kanarratti balaa konkolaataa dhaqqabeen namoonni 70 ol miidhaa qaamaa sasalphaafi ulfaataaf saaxilamuu maddeen ibsan.
[SQ, amajji 27,2018] Mana Hidhaa Qiliinxoo Keessatti dhukkubsataa kan jiru Eliyaas Kifluu gargaaruuf jecha Dilbata darbee Amajjii 21 bara 2018 qophiin tokko magaalaa Finfinnee keessa kan jiru galma giddu gala aadaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamee jira.
Weellesaa, ogeessa kaameeraa fi Dizaayinii uuffata aadaa Oromoo baasuun kan beekamu Eliyaas Kifluu mana hidhaa keessatti fayyaan isaa dhibamee dhukkubsataa akka jiru ammaan dura mana murtii duratti dhiyaachuun dubbataa ture. Kanaafis jecha wal’anssa fayyaa argachuuf akkasumas mucaa isaa deggeruuf jecha qophiin kun gaggeeffamuun ibsamee jira.
[SQ, amajji 27, 2018] Magaalaa Waldiyaa keessatti borumtii ayyaana cuuphaa irra mormii ka’een walqabatee tarkaanfii humna eegdota nageenyaan fudhatameen lubbuu hedduun baduun ni beekama.
Ajjeechaa raawwatame kana haaluudhaan Mootummaan namoota torbatu du’e haa jedhu malee, lakkoofsi namoota du’anii fi miidhamni irra gahee akka sana caalu maddeen ni dubbatu. Maddeen akka nuuf ibsanitti, namoota du’an kana keessatti maanguddoonniifi daa’imman akka hammataman beekameera.
Akkasuma Kaaba biyyattii Raayyaa Qobboo Keessatti uummanni qabeenyaa mootuummaa barbadeessaa kan jiruuf mootummaanis dhukaasaa jiraachuutu himame.
[SQ, amajji 25,2018] Godina Booranaa Moyaaleetti namoonni ajjeefamanii, kuun madaa’uun beekame.
Tibba darbe keessa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti dirgimmiin ispoortii geggeeffamaa tureera. Dorgommii kana irratti balaa Moyaaleetti uumameen miidhaan uummatarra ga’eera. Dhukaasaa fi reebicha dhakaa dargaggootaa dorgommii ispoortii sadarkaa godinaatti gaggeefamaa ture mo’achuun gammachu isaanii ibsachaa turanirratti raawwatameen lubbuun namootaa darbuufi kaan ammoo miidhaaf saaxilamu, maddeen himaniiru.
Balaa uumame kanaan humni ittisaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoorraan miidhaa gurguddaa geessiseera.
Miidhaan kan raawwatame warra jeeqaa turan irratti osoo hintaane “dargaggoota dorgommii ispoortii sadarkaa godinaatti adeemsifamaa ture mo’achuun geeba qabatanii magaala keessa sirbaa turan” irratti kan jedhan maddeen isaanis konkolaataa ittiin deemaa turan keessatti dhakaadhaan rukkutamuu isaaniitu himame.
Maddi rakkoo kanaas kan jalqabe dhalattoonni naannoo Soomalee dargaggoota naannoo Oromiyaa sirbaa turan irratti dhagaa darbachuu isaaniiti jedhan.
Erga dargaggoota Oromoorratti dhagaan darbatamee miidhaan sasalphaan dhaqqabee sana booda ture miseensootni raayyaa ittisa biyyaa dargaggoota naannoo Oromiyaa irratti dhukaasa kan banan.
Namoonni torba ta’anis dhakaa fi rasaasaan miidhaa qaamaaf saaxilamu isaanii gabaasaan keenya dubbataniiru.
“Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo Lafa gammachuu itti ibsachuu danda’an dhabanii akka jiran hojiin mootummaa wayyaanee guyyaarraa mullataa jiru ifoomseera.”
Gama biraatiin ammoo itti gaafatamaan waajjira dhaabaa aanaa Moyaalee obbo Turaa Mallichaa miseensoota raayyaa ittisa biyyaatiin walgahii irraa fudhatamanii kaampii keessa hidhaarra kan bulan odeeffannoon nuti arganne addeesseera.
“Dhimmichi rakkoo raayyaan ittisa biyyaa gartummaan uumeedha” kan jedhan Itti Aanaa Bulchaa Aanaa Mooyyalee Obbo Hassan Mallichaa, raayyaan ittisa biyyaa nama tokko ajjeesee namoota shan madeessuu isaa madda odeeffannoo keenyaa BBC Afaan oromootti himaniiru.
“Tarkaanfii irra deddeebiin raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa irratti fudhachaa tureen yeroo garaa garaatti namoonni afur ajjeefamuun beekameera.
Qaamoleen ajjeechaa kanneen raawwatanis seerratti akka dhiyahataniif uummanni gaafachaa turullee, hanga ammaatti qaamoleen kunneen seeratti akka hin dhiyaanes maddi oduu keenyaa ibseera.
[SQ, amajji 75,2018] Fincilli diddaa uummata Amaaraa Kan Itti Fufe Yoo Ta’u Raayyaa Qobboo Keessatti Tarkaanfii Uummanni Fudhateen mana Hidhaa cabsuun Hidhamtoota Heddu Bilisa Baasanii Jiru.